Guddoomiyihii magaalada Cadan ee dalka Yemen oo lagu dilay qarax – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyihii magaalada Cadan ee dalka Yemen oo lagu dilay qarax
Guddoomiyihii magaalada Cadan ee Koofurta Yemen Jacfar Mohamed Saad iyo qaar ka tirsan ilaaladiisa ayaa lagu dilay qarax ka dhashay gantaal lagu tuuray gaari uu la socday.
Jacfar ayaa la sheegay inuu door weyn ka ciyaaray ka saaridii Kooxda Xuutiyiinta magaalada Cadan bishii July ee sanadkan.
Kooxda ISIS ama Daacish ayaa sheegatay mas’uuliyada weerarka lagu dilay Guddoomiyaha magaalada Cadan.
Sidoo kale waxaa weerarkaas ku dhintay qaar ka mid ah Ilaalada Guddoomiyaha Cadan Jacfar Mohamed oo gaariga la saarnaa, xilliga gantaalka lala beegsanayay.
Kooxda ISIS ayaa bilihii la soo dhaafay ku xoogeysanayay dalka Yemen, iyagoo qaaday weeraro qaraxyo ay la beegsatay dowladda Yemen iyo Xuutiyiinta.
Guddoomiyaha magaalada Cadan Jacfar Maxamed ayaa xiriir dhow la lahaa Madaxweynaha Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi oo muddo bilooyin ah musaafuris kaga maqnaa Yemen, hase ahaatee dib ugu soo laabtay Cadan, markii laga saaray Jabhada Xuutiyiinta.
Madaxweynaha Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi ayaa bishii October ku dhawaaqay in magaalada Cadan ay tahay caasimada KMG ah ee Yemen.
Jabhadda Xuutiyiinta ayaa gacanta waqooyiga Yemen, sida caasimada Sanca iyo magaalooyin kale oo muhiim ah.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay Dagaal u dhaxeeya ma jirto Mareykanka iyo Islaamka
China oo Afrika u balanqaaday $60 bilyan oo maalgelin ah